Fitsipika ara-toekarena manapaka ny fisokafan'ny dia any Dubai, Egypt, Lebanon, Qatar, Tunisia na dia misy aza ny valanaretina?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitsipika ara-toekarena manapaka ny fisokafan'ny dia any Dubai, Egypt, Lebanon, Qatar, Tunisia na dia misy aza ny valanaretina?
Loka Seychelles - Dubai_0
Firenena Arabo, indrindra ireo miankina betsaka amin'ny fizahantany toa Dubai, Egypt, and Lebanon, dia mandray fomba hafa rehefa mamaha ny fanidiana napetrany amin'ny sisintaniny sy seranam-piaramanidina hiadiana amin'ny COVID-19.
Dubai, ilay be mponina indrindra amin'ireo emirata fito mandrafitra ny Emira Arabo Mitambatra, dia nanokatra ny varavarany ho an'ny mpitsidika ny 7 Jolay. Tonga ny fisokafana na dia teo aza ny fanapahan-kevitry ny Emirà Arabo Mitambatra mba hisorohana ireo mponina ao aminy tsy handehandeha any ivelany ary hanakanana ireo vahiny tsy hiditra an-tsakany sy andavany.
Dubai dia tokan-trano any Mitambatra, ny zotram-piaramanidina lehibe indrindra any Moyen Orient, ary ny mpitatitra entana lehibe indrindra fahefatra manerantany amin'ny kilometatra mpandeha voatondro. Emirates dia nametraka fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana maromaro hanaterana indray ny sidina voatondro.
Fitaovana fidiovana fanampiny no homena ny mpandeha tsirairay rehefa miditra ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai sy amin'ny sidina mankany Dubai. Ny fonosana dia misy sarontava, fonon-tànana, famafana bakteria, ary fanadio tanana.
Ny fonon-tànana sy ny sarontava dia takiana amin'ny mpanjifa sy ny mpiasa rehetra ao amin'ny seranam-piaramanidina any Dubai, fa ny saron-tava ihany no omena ny sidina Emirates.
Rehefa tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina dia manara-maso ny mari-pana ho an'ny mpandeha sy ny mpiasa rehetra ny scanner thermal amin'ny faritra maro. Ho fanampin'izay, napetraka amin'ny tany sy amin'ireo toerana fiandrasana ireo tondro fisintahana lavitra ny vatana mba hanampiana ireo mpandeha hihazona ny halaviran'ny ilaina amin'ny fisavana, ny fifindra-monina, ny fiakarana ary ny famindrana toerana.
Mohammed Yasin, lehiben'ny paikady ao amin'ny Al Dhabi Capital, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa misy ny fanerena mba hanafainganana ny fisokafan'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny.
Izany, hoy izy, "dia hitarika amin'ny famerenan'ny asa [hotely], ny seranam-piaramanidina ary ny toeram-pivarotana, izay lafiny tena lehibe amin'ny toekarenan'i Dubai."
Nilaza i Yasin fa talohan'ny areti-mandringana, ny fizahan-tany sy ny sehatr'asa mifandraika amin'izany dia mitentina "40% eo ho eo" amin'ny harin-karena faobe nataon'ny emirata.
Nanteriny fa voafehy ny krizy virus coronaavirus, ny sehatry ny fahasalamany manana fahaizana mitsabo ny marary.
“Nosokafana ireo hopitaly an-tsaha mba hampitomboana ny fahafahan'ny rafi-pahasalamana, ary rehefa nanomboka nihena ny isan'ny tranga dia nihidy ny sasany tamin'ireo hopitaly ireo. Nanjary zava-dehibe noho izany ny fanokafana indray ny sehatry ny fizahantany, "hoy ny fanazavany.
Ny fanapahan-kevitra dia mifandraika amin'ny fikarohana momba ny fifandanjana eo amin'ny risika sy ny tombontsoa.
"Ankehitriny, ny lanjan'ny tombony dia nanjary lehibe kokoa noho ny risika," hoy izy.
Tamin'ny 1 Jolay, nanokatra ny seranam-piaramanidina voalohany i Egypt hatramin'ny volana martsa. Na dia nahita tranga sy fahafatesan'olona betsaka kokoa noho ny efa-bolana teo aza i Jona dia nanapa-kevitra ny governemanta fa hatsahatra ny fepetra maro noraisina mba hifehezana ilay virus mba hamonjy ny toekarena.
EgyptAir dia nanambara fa ny mpandeha dia mila manao facemasks amin'ny fotoana rehetra, manomboka amin'ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina, raha ny mpiasa rehetra kosa manao fitaovam-piarovan-tena (PPE), ao anatin'izany ny ampinga, ary arahi-maso matetika ny mari-pana.
Ho refesina koa ny mari-pana amin'ny mpandeha. Misy ny sticker mipetaka amin'ny tany mba hanampiana ireo mpandeha hihazona halavirana azo antoka.
EgyptAir dia namerina nandefa Ejiptiana mihoatra ny 5,000 avy any ivelany, ary ny Minisiteran'ny Fizahan-tany dia nanokatra tsangambato, anisan'izany ny Piramidan'i Giza sy ny Tranombakoka Egyptianina any Kairo.
Mohammed Farhat, mpandalina iray ao amin'ny Ivotoerana fandalinana stratejika Al-Ahram, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa voadinika tsara ny fanapahan-kevitry ny governemanta raha jerena ny vidin'ny fanidiana.
"Firenena Arabo sy iraisampirenena maro no nandray fanapahan-kevitra mitovy amin'izany satria tsy afaka mijanona eo ambany fikatonantsika isika - toe-javatra miavaka io noho ny toe-javatra miavaka," hoy izy.
Ny fanapaha-kevitra ejipsiana dia ampahany amin'ny fironana manerantany ny hitazonana ny ekonomia hisokatra mba hahafahan'ny olona manohy mamelona ny ankohonany, hoy ihany izy.
"Voafetra ny tahiry [ara-bola] manerantany ho an'ny toe-javatra miavaka," hoy izy nanamarika. “Ny firenena rehetra dia manana tahiry handoavana vola isam-bolana sy fandaniana ao an-trano amin'ny toe-javatra miavaka, saingy tsy ho tratry ny krizy tokana ireo.”
Tena zava-dehibe, hoy hatrany izy ny fitehirizana ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny krizy ho avy.
“Na ireo firenena manana tahiry goavambe aza dia tsy nanao vivery ny ainy, satria tsy azontsika atao ny mamarana ireo tahiry manerantany ireo amin'ny fanidiana iray noho ny coronavirus. Ireo firenena dia tsy maintsy manana tahiry ho an'ny krizy maika hafa, "hoy izy.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Beirut Rafik Hariri dia nisokatra ho an'ny sidina 10% ny fahafaha-miasa tamin'ny 1 Jolay, miaraka amina fepetra fiarovana sy fidiovana henjana.
Ny facemasks dia tsy maintsy atao ho an'ny mpandeha sy fiaramanidina ao anaty terminal ary amin'ny fiaramanidina. Ny mpandeha rehetra dia takiana mba hitondra sarontava be dia be ary hanova izany isaky ny adiny efatra. Tsy maintsy mitondra mpanadio tanana ihany koa izy ireo.
Jassem Ajaka, mpampianatra toekarena ao amin'ny oniversite Libaney, mahatsapa fa manan-danja ny fanapahan-kevitra hanokatra ny seranam-piaramanidina tsy satria hanampy ny sehatry ny fizahan-tany izany, fa noho ny habetsaky ny vola vahiny hiditra ao amin'ny firenena.
“Betsaka ny olona voan'ny COVID-19 no miditra any Libanona mamaky ny seranam-piara-manidina. Noho izany, ny fitazonana ny seranam-piaramanidina ho zavatra azo antoka indrindra, fa rehefa fatiantoka isan'andro eo amin'ny 30 tapitrisa dolara isan'andro [amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany] dia misy olana lehibe, ”hoy izy tamin'ny The Media Line.
I Libanona dia nijaly noho ny krizy ara-bola mihoa-pampana dolara, izay iray amin'ireo antony nahatonga ny fanoherana an-dalambe tao amin'ny firenena. Talohan'ny nisokafany dia nisokatra ny seranam-piaramanidina ho an'ireo mpitsangatsangana izay nitondra dolara nilaina hanohanana ny libaney pounds sy handoavana ny fanafarana sakafo.
"Tsy afaka mandeha tsy misy vola vahiny intsony i Libanona," hoy izy. "Na eo aza ny fitomboan'ny trangana virus corona, tena ilaina amin'ny firenena ny vola."
Tao Jordania, nanambara ny governemanta tamin'ity herinandro ity fa hanomboka hanokatra ny sisintaniny sy ny seranam-piaramanidiny amin'ireo mpandeha iraisampirenena amin'ny volana Aogositra ny governemanta aorian'ny fanakatonana efa-bolana.
Ho fiezahana hampihena ny risika dia hisy ny lisitr'ireo firenena ekena. Ho fanampin'izany, ireo mpandeha tonga dia tsy maintsy mandalo fitsapana coronavirus farafahakeliny 72 ora alohan'ny fiaingany ary manao fitsapana faharoa rehefa tonga.
Ny fanjakana dia heverina ho faritra azo antoka, noho ny fahombiazan'ny governemanta tamin'ny fifehezana ny fihanaky ny viriosy.
Mazen Irshaid, manam-pahaizana manam-bola any Amman izay manoratra ho an'ny haino aman-jery arabo marobe, nilaza fa zava-dehibe ny fizahan-tany satria 10% ny harinkarenan'i Jordania talohan'ny areti-mandringana.
"Rehefa velona indray ny sehatry ny fizahan-tany dia hitodika tsara amin'ireo sehatra hafa izay tsy misy ifandraisany mivantana izany, toy ny fitaterana, ny fandraisam-bahiny, ny fikarakarana sakafo ary ireo sehatra hafa ahazoana fidiram-bola," hoy izy tamin'ny The Media Line.
Nomarihiny fa mpizahatany iray tapitrisa mahery no nitsidika an'i Jordan tamin'ny taon-dasa.
"Miorina amin'ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra tato ho ato, ny fisokafana dia hiadana tsikelikely ary avy amin'ny firenena tandindonin-doza, ary arak'ireo mason-tsivana nofaritan'ny fanjakana," hoy i Irshaid.
Ny sehatry ny fizahan-tany dia nahita fitomboana lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy, indrindra taorian'ny nahazoana fitoniana somary somary vis-à-vis mpifanila vodirindrina amin'i Syria sy Irak, hoy izy.
"Ny valanaretina coronavirus dia namerina anay ho amin'ny kianja iray," hoy izy nanampy. "Tsy nisy fiatraikany teo amin'ny fizahan-tany sy ny anton'izany ny fiatraikany, fa koa ny toekarena amin'ny ankapobeny."
Prof. Yaniv Poria, filohan'ny Departemantan'ny Hotel sy ny fitantanana fizahantany ao amin'ny Oniversite Ben-Gurion any Negev any Israel, dia nilaza tamin'ny Ny tsipika Media fa orinasam-pitaterana maro any amin'ny faritra no manana olana lehibe amin'ny fidiram-bola miditra noho izany dia voatery hampiakatra ny vidiny be.
"Tokony hoheverinao fa ny orinasam-pizahan-tany dia tsy mahazo vola amin'ny fivarotana ny tapakila irery, fa amin'ny fivarotana fonosana fialan-tsasatra sy hotely ao anatin'ny fifanarahana iray," hoy izy. "Azoko antoka fa aorian'ny famaranana ny coronavirus dia hiakatra lavitra aza ny vidiny."
Ireo orinasan-dia dia tsy maintsy manomboka mieritreritra ivelan'ny boaty mba hahitana fomba hijanonana amin'ny asa aman-draharaha, hoy i Poria.
“Angamba tokony mikasa ny handeha ho any anaty fiaramanidina iray ihany izy ireo. Raha ny mahazatra dia manana fiaramanidina ho an'ny entana sy fiaramanidina ho an'ny mpandeha izahay. Angamba mila manokana fitokanana ho an'ny entana sy faritra hafa amin'ilay fiaramanidina mitovy ho an'ny mpandeha izahay, ”hoy izy.
"Tsy maintsy mamorona izy ireo mba hahasoa azy io," hoy izy nanampy.
Nanamarika i Poria fa ny zotram-piaramanidina dia mila mifikitra amin'ny fenitra sy fomba fikajiana hitazomana ny kalitaon'ny serivisy.
"Taloha, ny dia dia traikefa sy traikefa nahafinaritra nandrasan'ny olona," hoy ny fanazavany. “Ankehitriny dia hihena tsy ho toy izany. Tsy hitovy ny serivisy. Ny mpandeha dia tsy hanana ahiahy be, tsy ny kalitaon'ny serivisy ihany, fa ny fahadiovan'ny fiaramanidina sy ny mpandeha hafa koa. ”
Ny fiantohana dia ho anton-javatra lehibe iray hafa rehefa manapa-kevitra ny hanidina sy ny zotram-piaramanidina iza izy, hoy i Poria, indrindra satria maro ireo sidina noesorina ankehitriny, ary mpanjifa maro no manana olana amin'ny famerenana ny volany.
"Ireo orinasa matanjaka ara-bola sy mahavita… manonitra ny mpandeha raha sanatria ka esorina ny sidina dia ireo orinasa hahomby," hoy izy. "Mandrosoa, ny olan'ny fiantohana sidina sy ny onitra dia hanana andraikitra lehibe."
Ny fahatokisana ihany koa no ho lohalaharana amin'ny hoavin'ny fizahan-tany, satria hanomboka hisafidy seranam-piaramanidina miorina amin'ny fomba heverin'izy ireo fa manaraka ny fomba fiarovana izany ny olona.
"Betsaka no tsy te hisidina afa-tsy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izay heverin'izy ireo fa hentitra amin'ny fiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny ekipany sy ny mpandeha azy," hoy izy.
Mety misy ihany koa ireo tranga izay hiaingan'ny sidina raha tsy ampy ny mpandeha.
"Taloha dia maro ny olona nanapa-kevitra ny hanao dia iray na roa andro mialoha, fa tsy izany intsony no hatao," hoy i Poria.
"Tsy maintsy manomana lavitra mialoha ny olona ary tsy ho mora izany," hoy hatrany izy. “Ho sarotra kokoa izany. Ny olona dia tsy maintsy manome mari-pankasitrahana fa tsy manana virus izy ireo. Tsy maintsy mameno endrika maro izy ireo alohan'ny handehanana, ka tsy ho fanapahan-kevitra mora izany. ”
Ny mpandeha sasany, mino izy fa tsy hanidina raha tsy tena tsy maintsy mandeha.
“Ny Zoom dia mamela antsika hanao zavatra izay tsy noeritreretinay ho azontsika taloha. Na eo amin'ny tontolon'ny akademika aza, raha afaka manao fihaonambe amin'ny alàlan'ny Zoom ianao dia ataontsika amin'ny alàlan'ny Zoom fa tsy mandeha ", hoy izy. "Ny namana sy ny havanao izay mandeha mariazy, fitsidihana na hetsika ara-tsosialy hafa dia ho zavatra kely kokoa noho ny tamin'ny lasa."
Qatar ananambara tamin'ny 21 Jolay fa manomboka amin'ny 1 Aogositra dia avela hivoaka ivelan'ny firenena ny olom-pirenena sy ny mponina maharitra ary miverina isaky ny maniry.
Ireo fahatongavana avy any amin'ny "firenena atahorana ambany" 40 dia tsy maintsy hiatrika fitsapana COVID-19 rehefa tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina ary manasonia fanoloran-tena hanao quarantine mandritra ny herinandro.
Aorian'ny hafitoana dia hiatrika fitsapana faharoa izy ireo. Raha ratsy dia afaka mivoaka ny quarantine izy ireo; raha misy lafy tsarany, dia hafindra any amina toeram-pitsaboana mitokana izy ireo.
Ireo mpitsangatsangana avy any amin'ny firenena izay tsy ao anaty lisitra azo antoka dia tsy maintsy mahazo «taratasy fanamarinana tsy misy viriosy» avy amin'ny toeram-pitsapana COVID-19 nahazo fankatoavana tsy mihoatra ny 48 ora alohan'ny sidina ary mankatoa ny politika momba ny quarantine aorian'ny nahatongavany.
Tamin'ny tapaky ny volana Jona, ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany nanambara Tonizia toerana fizahan-tany azo antoka, ary ny 27 Jona dia nanokatra ny sisintaniny ho an'ny mpizahatany ny firenena Afrika Avaratra.
Nanambara ny Fahefan'ny seranam-piaramanidina Israel tamin'ny 20 Jolay fa ny mpitsidika vahiny, ankoatry ny vitsy anisa, dia hosakanana tsy hiditra ao amin'ny firenena hatramin'ny faran'ny volana septambra 1. Misy ny tatitra fa mbola hanakana ny fidiran'ny vahiny hatramin'ny volana Novambra ny firenena.
nataon'i DIMA ABUMARIA, The MediaLine
WISeKey dia mandefa WISeTravel, ilay fampiharana fizahantany ho avy izay tsy tianao hialana ao an-trano raha tsy misy
Port Canaveral: fanampiana lehibe avy amin'ny COVID-19 ilaina